Somali : Solidus
Solidus waxay siisaa hay’adaha xal sahlan in la aruuriyo deeqaha ayadoo la marayo samafalid, kafaalo-qaadid iyo xubinnimo. Waxaan xaqiijinaa hay’adaadu inay ku hesho dhaqaale joogto ah dadaal yar, ayadoo la hubinayo in deeqaha iyo qaaraanka si toos ah u gasho wakhtigii la rabay akoontigaaga.
Adeegayagu wuxuu kuu ogolaan inaad isku diiwaangaliso kafaale-qaadayaal iyo xubno, la xiriir iyaga oo ka hel warbixin muhiim nidaamka onlaynkayaga. Solidus umabaahna wax sooftiweer ku shaqayn ah. Solidus waxay xaqiijisaa in deeqaha u baahan canshuurta lagu wargaliyo hay’adda waxayna u habaysaa warbixinta sharci ee sanadlaha ah in loo diro deeq-bixiyayaasha. Ujuurada xubinnimo waxaa laga aruuriyaa ayadoo la marayo Solidus, xaqiijinta ujuuradaadii la bixiyay in la qoray oo loo helay markaba.
Faa’iidooyinka Solidus Adeegga Deeqda:
Dhaqaale la arki karo
Qalabyo u sahlan isticmaalaha
Muraajicaynta deeqaha mashruucyada kala duwan
Warbixinta canshuurta ee canshurta laga jari karo deeqda
AvtaleGiro adeegsiga aaladda saxiixa ee leh BankID (Dhigaalka deeqaha tooska ah)
Paper Giros oo leh aqoonsi lambarka macmiilka
Xiriirka saxda ah ee deeqbixiyayaasha
Solidus waxay hormarisay:
Ururada diimeed iyo kaniisadaha
Solidus waxaa la aasaasay 2004 maantana in ka badan 500 oo hay’adood ayaa isticmaalaya adeegayaga. Waxaan caawinaynaa hay’adaha si uu u kordho dhaqaalahoodu ee deeqaha, xubinnimadooda iyo ajuuradooda iyo si loo hagaajiyo xiriirka deeqbixiyayaashooda iyo xubnahooda. Waxaan nahay shirkad si wanaagsan u qaabaysan oo leh dhaqaale fiican.
Nala soo xiriir wax bixinta maanta
Ma xiisaynaysaa barashada wax badan oo ku saabsan waxa Solidus ay u qaban karto hay’adaada?
Xor ahaw inaad nala soo xiriirto wixii xog ah oo dheeri ah.
Teleefan: 99 39 85 50
Ciwaanka: Solidus AS, Postboks 81, N-1312 Slependen